Tuuray birta waalka sii daayo hawada - Shiinaha Tianjin Tanggu TWT Madax
bir ah ku tuura waalka sii daayo hawada
habka qiiqa waa siman, ayaa ka hortagi kara dhacdo ee isbedbedelka cadaadis ama ifafaale kale oo burbur. Air laga saari karaa in dhuumaha markii biyaha la buuxsami doona biyo, oo loo daadgureeyay karo ama cadaadis xun ee dhuunta, sida xaaladaha kala go'ida column biyo si toos ah u furay doonaa, geliyey dhuumaha in la baabi'iyo cadaadiska xun. socodka High xawaaraha qiiqa gaaska, iyo xataa hawada ee xawaaraha sare qasan ceeryaamo biyo aan ka dhigi doono dekedda qaaca in ay ...
Habka qiiqa waa siman, ayaa ka hortagi kara dhacdo ee isbedbedelka cadaadis ama ifafaale kale oo burbur.
Air laga saari karaa in dhuumaha markii biyaha la buuxsami doona biyo, oo loo daadgureeyay karo ama cadaadis xun ee dhuunta, sida xaaladaha kala go'ida column biyo si toos ah u furay doonaa, geliyey dhuumaha in la baabi'iyo cadaadiska xun.
Socodka High xawaaraha qiiqa gaaska, iyo xataa hawada ee xawaaraha sare qasan ceeryaamo biyo aan ka dhigi doono dekedda qaaca in la xiray ka hor. Sibraar ku xiran yahay oo keliya ka dib markii hawada si buuxda saaray.
Waqti kasta, in alaale inta cadaadiska nidaamka ka hooseeyo cadaadiska Hawada, sida dhacdo ee column biyo ifafaale isa-soociddiisa, waalka hawada isla markiiba furi doonaa nidaamka hawada, si looga hortago in bixitaanka ee cadaadiska xun ee nidaamka. Isla mar ahaantaana, nidaamka waqtiga faaruqinta hab wakhti dardar kartaa heerka faaruqinta.
heerkulka Isticmaalka: -20 ℃ ~ 120 ℃
size Khusayso: DN25 ~ DN300
Heerka Connection: GB · Din · ISO · BS
Previous: Air sii daayo waalka
Next: orifce Double waalka sii daayo hawada
hagaajin Control Air Madax
Air kombaresarada Safety Madax
Cadaadis Air Relief Madax
Air Release Madax
Air Relief Madax
Automatic Air Release Madax
Automatic Air Madax
Automatic Air sibraar ku Madax
Bi'ir Industrial Air Release Madax
ku tuura Iron Air Release Madax
Cast tartanka Iron Air Release Madax
Dn50- Dn300 Air Release Madax
Double Orifce Air Release Madax
Air Tayada Wanaagsan Release Madax
Cadaadis High Solenoid Air Madax
pint yimaa-Air Release Madax
Cadaadis Release Madax
Quick Release Madax
Release Solenoid Madax
Sigle Orifce Air Release Madax
Vacuum Air Relea se Madax
Water Air Release Madax
Sigle orifce waalka sii daayo hawada
orifce Double waalka sii daayo hawada